Ụgbọelu m na-ama jijiji mgbe m gbanwere echiche. Kedu ihe m kwesịrị ịme ? (FSX) - Rikoooo
My ụgbọelu bounces mgbe m na-agbanwe echiche. Kedu ihe m kwesịrị ịme ? (FSX)
Ụfọdụ n'ime gị ụgbọelu ibiaghachi na tarmac, ma otu ihe ahụ na-eme n'ihi na ugbo ala gburugburu: nke ahụ bụ a mara ahụhụ, nke nwere ike a ga-edozi site modifying «ntupu Mkpebi» ka 5m kacha. Na Display Settings nke FSX, pịa na «mma» tab ma gbanwee mkpebi dị ka e gosiri n'okpuru: